Ndi Rotor cranks di nma? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Rotor 3d crank nyochaa - olee otu anyi si edozi
Rotor 3d crank nyochaa - olee otu anyi si edozi
Ndi Rotor cranks di nma?
NaRotor2InPower DM Road usoro bu ihe ilere anya: emeputara ya nke oma, onu ogugu ike bu ihe kwesiri ntukwasi obi ma ghagharia ya, ma inwere nhọrọ nke oval ma obu ogbe gbara gburugburu na onodu uzo di mfe igbanwe.Eprel 23 2019
(Saa) - Anyị nọ ebe a na Rotor HQ na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na Madrid iji chọpụta otu esi etinye Q Rings, sayensị dị n'azụ ya, wee bulie ha. Enwere m obi anụrị, ụfọdụ nsonaazụ m kacha mma dị na Q Ringsand ma ọ dịla anya kemgbe m jiri ha mee ihe, enweghị m ike ichere ịmụtakwu banyere mgbanwe ndị emerela kemgbe afọ .Rotor bụ onye ama ama maka n'ichepụta aluminom akụrụngwa kpụrụ yinye maara dị ka Q-yiri mgbaaka.
Ozizi a na-akpata Q-Rings bụ ịrụ ọrụ nke ọma. Ebumnuche bụ iji belata ogo gị ka ị nọ na etiti nwụrụ anwụ nke ntụgharị ụkwụ gị iji mee ka ị gaa ọsọ ọsọ. Ntugharị ahụ na-abawanye na isi dị n'ime iti ọ bụla ebe ị nwere ike iwepụta ike kachasị na pedals.
Ebumnuche bụ ịnweta ikike ịnyefe ikike karị na ịrụ ọrụ nke ọma. Pablo, nke a were ọtụtụ afọ. Emeghị n'otu ntabi anya.
Nwere ike ịkọwaara m tiori nke na-abanye na rotor Q? Na-akụ? - Echiche bụ na otu ụkwụ ga-agbatị nwayọ na nke ọzọ ga-aga ọsọ ọsọ na adọ adọ iji mimomie ogwe aka nke onye na-egwu mmiri. Mgbe ahụ ọ dị mma maka ikpere, mana ndị na-ahụ maka ihe ọ bụla, ka anyị kwuo na oge nkwụsị, yiri nke a. Mgbe ahụ, anyị kwụsịrị echiche a na 2005 wee nweta ihe kachasị mma na ngwaahịa a.
N'ikwu okwu banyere biomechanics, anyị tinye ya niile n'ime mgbanaka oval anyị nke bụ naanị mgbanaka na njedebe dị ntakịrị mana na njedebe ọ mebaghị ibu ahụ, ọ mebaghị ọnụahịa ahụ, mgbe ahụ ọ bụ Ọ dịkarịrị mfe iji nwee ihe ịga nke ọma - Ogologo oge ole ka mgbanaka ga-adịru? Kedu kilomita ole ka ị chere? - A otutu - Ee (chịrị ọchị) - Ọ bụrụ na m gaa, chee Carlos Sastre Grandfondo - Ee - Ma aga m aga ebe ahụ na Avilla, ma ugbu a, ị hụrụ mmadụ ole 2008, 9, Jiri mgbanaka 10 ma ka na-ejikwa otu ihe ahụ. Dị ka a ga - asị na ọ gaghị ekwe omume ịga n'ihu ire. - Ya mere, ihe na-emetụ m aka dị ka isi ihe ga-eme ka ị nwee ihe ịga nke ọma na Q-Rings bụ ka ị si eso ụfọdụ ndị ọkachamara kachasị elu rụọ ọrụ kemgbe ọtụtụ afọ.
Onye mmeri nke oge ụwa, mmeri nke de de France, nke ọma, ndepụta ahụ na-aga n'ihu. Olympia. I meriri ihe niile.
Kedu ka nke ahụ si nyere aka na mmepe nke yiri mgbaaka? - Echere m na anyị tinyere nnukwu mbọ na ihunanya dị ukwuu n’ịgbaso ndị ọkwọ ụgbọ ahụ iji mee ka ha kwenye na anyị ga-akwado ha otu o kwere mee Nnwale, ule na (ntamu), laa azụ ọ dịka (ntamu) ndị a nke ngwaọrụ. Mana ebe anyị niile na-eso n'ụgbọ ala, na-agbanwegharị gwọọ n'otu ụbọchị, ọgba tum tum dị iche iche, OCP dị iche iche na-anwa ịmeghari ovalization, na-achọ ihe a ga-eji maka ụzọ oge, ihe ekwesịrị iji maka ịrịgo, Eva, Dịka ọmụmaatụ , Manila Vosch, bụ na mmalite, ọ na-eji nghazi dị iche iche maka ice, maka agbụrụ dị oke oyi na The Cycle Closed. Mgbe ahụ, mgbe anyị rutere ndị ọkwọ ụgbọ ala ahụ nso, anyị chọpụtara na ihe ịga nke ọma na-abịa.
Anyị enweela ezigbo nsonaazụ ọma. (egwu piano dị egwu) - Tupu anyị abanye n'ụlọ ọrụ ahụ, Rotor na ndị Rotori siri ọnwụ na anyị ga-eso ha gaa njem nri ehihie ha. Ihe omume dị mkpa na ndụ kwa ụbọchị na Rotor. (brooding music) Agbanyeghi na echere m na nke a abụghị ụzọ ha si aga kwa ụbọchị, ị nwere ike ịrụ ụka na ọ na-enye ebe dị egwu.
M kwụsịtụrụ rotor nri ehihie otu ịnyịnya na-enye gị a obere rundown nke igwe kwụ otu ebe ha wuru kpọmkwem maka m, nke m Canyon Aeroad, ma ọ bụ yiri nnọọ. Ọ nwere otu ụdị ahụ mana ọ dị na agba monochrome ahụ kwụpụrụ iche na ROTOR 1x13 groupet n'echiche m. Yabụ na otu a enwere m casset 39-10 na azụ, yana mgbanaka Q-46, nke m na-agba ugbu a n'ọnọdụ atọ.
Enwere m 170 mil, abụọ na otu ike crank na ya, nke bụ n'ezie oyi n'ihi na m nwere ike ịhụ itule, n'ezie na ya pedals, na iche iche-abịa zuru ezu na Rotor nwere R45 wiil, na anyị GP 5000 Taya na ya . Rotor wee soro Magurato jikọọ aka iji mepụta diski diski ha. Niile na ọ bụ oge mbụ m na-agba ịnyịnya a haịdrọlik otu, na dị nnọọ anya na-ele, ihe ebe na-anwale ya. (egwu rhythmic) Ya mere ndị Rotorians, dịka ha si Ro. a na-akpọ ya ịhụnanya, kọwara ihe kpatara njem ehihie ji dị ha mkpa.
Ọbụghị naanị na ọ bụ ohere ịhapụ ọnọdụ ọrụ ọfịs, ọ bụ oge dị mma ịme ule ngwaahịa. Ya mere, ihe ha mepụtara n'ụtụtụ a nwere ike ịnwale n'ehihie n'ehihie. Ma maka okike nnwere onwe nke echiche.
Guysmụ nwoke ahụ na-ekwu na n'ehihie ọ bụla, ha na-eji ịnụ ọkụ n'obi amaliteghachi ọrụ. N'ehihie na-aga ngwa ngwa karịa ma ha nwere n'ihi ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ, ụgbọala ahụ ejiri nri ehihie mechie tupu anyị agawa ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Enwere m mmasị karịsịa n'ịgbaso njem nke mgbanaka mgbanaka.
Site na mpempe akwụkwọ na ngwaahịa ikpeazụ. (upbe music) You nwere ike ịsị, m nọ n'akụkụ mbụ nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe ebe a na Rotor ugbu a. Anọ m n'akụkụ n'akụkụ nnukwu mpempe akwụkwọ 7075 nke aluminom nke ga-emejupụta eriri ya niile.
Abụọ na Q-yiri mgbaaka. Ọfọn, ka nke ahụ mee, a ga-ebuli nnukwu mpempe akwụkwọ igwe a na igwe izizi ebe a, nke a bụ MACH2, a na-akpọ ya MACH2 n'ihi nke ahụ Ọsọ ụgbọ mmiri nke na-egbutu mpempe akwụkwọ ahụ. Ọsọ nke mmiri a na-agba ọsọ ọsọ karịa ụda.
Ya mere, ọ bụ ngwa ngwa ngwa ngwa ma nwee ike belata oke ihe. Ugbu a, a na-eji biskit ndị a eme ihe yiri mgbaaka. Ma nke ahụ abụghị ihe m mebere, nke ahụ bụ ihe Rotor na-akpọ ha na eze, na Q-Rings ka emere site na ebe ndị ahụ.
Nke ahụ bụ iwelata mbibi na nzuzo iji mepụta njikọta. Ọ na-ewe ihe dịka nkeji abụọ iji belata otu n'ime ụdị ndị a bụ ngwa ngwa ngwa ngwa, na-echekwa na ị nwere ike ịkpụzi ihe dị ka mgbaaka iri isii na otu mpempe 7075 nke aluminium, ọ na-ewekwa ihe dị ka elekere abụọ, unmanned, igwe a na - eme ka ọ dị mfe ma nfuli ya. A na-eji ájá e ji egbutu ya kpochie ma tinye ya ma jiri ya mee ihe.
Yabụ enweghị ihe efu. A na-ebulikwa ogwe ndị ahụ ma rụgharịa ya. (egwu obi ụtọ) Nzọụkwụ nke abụọ nke usoro a na-ewere ọnọdụ na igwe igwe igwe DMC 65 H duoBlock.
Nke a bụ ebe mpempe akwụkwọ m nke aluminom na-abanye na igwe, na ihe nkwado emere. Igwe a na-eme mgbaaka abụọ n'otu oge. Ebe ọ bụ na mgbaaka ndị ahụ abụghị akụkụ, ha na-emepụta akụkụ ọ bụla n'otu n'otu.
Akụkụ mbụ A, na-esote n'akụkụ B. Nke a na-agba ọsọ ọsọ ọsọ ma yabụ ikike nke usoro nrụpụta. Ọfọn, M kwuru gị nke abụọ Tupu Akụkụ A na B na mgbanaka Q.
Akụkụ A, ná mpụga akụkụ nke ihe ịga nke ọma. Na Akụkụ B. Ndị a na-edozi n'otu n'otu, mana n'otu oge ahụ iji belata oge n'ichepụta.
Ugbu a mpempe akwụkwọ square m adịkwaghị ka mpempe akwụkwọ. Ọ bụ mgbanaka Aeroad Q ugbu a. Nke ahụ na-atọkwa m ụtọ.
Anyị nwere njikwa ngwa ngwa dị mma ebe a iji chọpụta na enweghị akụkụ ike na-adịgide na silring. Ọzọkwa inyocha na ezé nwere profaịlụ ziri ezi, ogo, omimi na obosara. N’ikpeazụ, ọ dị mma ịkpọtụ aha bụ mkpofu ndị fọrọ afọ.
Ugbu a o doro anya na ọ bụ naanị ihe dịka 20% nke ihe niile na-abanye na ụlọ ọrụ ahụ ka eji n'ezie na ngwaahịa ikpeazụ. Ma ndị ọzọ na-emegharị. O nweghi ihe efu n’inweta ihe igwe. (Joy music) Ugbu a, ihe nkedo m dị ọhụrụ na igwe ahụ ma enweta m ya na njedebe ikpeazụ tupu m ezipụ ya maka anodizing, ha na-ezipụ ha n'ọtụtụ Friday ọ bụla.
Na Fraịde ọ bụla ha na-alọghachi kpamkpam. Achọpụtara m na nke a na-adọrọ mmasị, ihe ọ bụla ejiri igwe na-eme nke Rotor mere na nke a na-ese ya, ebe a nwere ezé ole o nwere. (egwu na-ada ụda) A na-amata Rotor kacha mma maka ngwaahịa ojii ha nwere anodized.
Ma n’oge ahụ a na-ebuputa ihe ezumike niile. Ndị cranks ga-alọghachi anodized na Fraịde na-esote mgbe ezigara ha na Fraịde a maka eriri ndị a. Dịka a ga-asị na iji anwansi, lee abụọ ndị bịara n'izu a.
Ugbu a achọpụtala m otú e si arụ Q Rings, ọ bụ oge iji chọpụta sayensị dị n'azụ ya na otu esi eji omume na igwe kwụ otu ebe. Ya mere, anyị laghachi azụ na Rotor HQ. Anọ m n'ụgbọ ịnyịnya ígwè m ugbu a ma m na-aga n'ihu na Irene na-etinye m.
Na-anwale ule atọ iji chọpụta ọnọdụ kachasị mma maka m. Biko ị nwere ike ịkọwara anyị mbụ ihe bụ OCP na kedu ihe bụ OCA yana ule ndị m na-aga ime? onye ọ bụla na-agba otu ụzọ, na anyị niile na-etinye anyị kacha na kacha nta agha na akụkụ dị iche iche nke pedal njem. N'ihi ya, ọ dị ezigbo mkpa na anyị nwere ike ịkwado mgbanaka oval ka anyị wee nwee ike ịchọta nguzogide kachasị na nkuku ebe anyị na-etinye ike kachasị na nguzogide kachasị na nkuku ebe anyị na-enweghị ike ma ọ bụ ebe anyị na-etinye iji obere ike.
Ọ bụ ya mere anyị ji mepụta OCA, ezigbo igwe nkedo nke na-egosi ihe etiti ahụ gị dị na mgbatị gị, nke ahụ metụtara OCP - ma ndị a bụ otu ule ị na-eme na ndị otu egwuregwu gị. rotor? - Ee, kpọm kwem. - Ma olee otu anyị ga-esi na-arụpụta mgbe ahụ? - Ya mere, m ga-edekọ data na ekwentị ahụ na-edekọ, ọ bụghị naanị y ike na cadence, kamakwa OCA na OCP Metrics. OCA bụ ezigbo chaining n'akuku ma nwee mmekọrịta chiri anya na OCP, ndị a bụ ọnọdụ dị iche iche nke anyị nwere ike idobe mgbanaka oval n'ihe gbasara ham ahụ - ọ dị mma, yabụ mgbe m jiri mgbaaka Q afọ gara aga m na-agba ha na omume abụọ na nke a dabere na mmetụta na ndụmọdụ nke ndị otu egwuregwu ndị ọzọ, ihe dị ka nke ahụ.
Enwere m ezigbo ọchịchọ ịmata ma m kwesịrị iji nke a ma ọ bụ na ọ bụghị. (egwu obi ụtọ) - can nwere ike ilerịrị nọmba anya ebe a. - Ọ dị mma. - Nke a bụ nke mbụ nkeji.
Na nkezi ike nke 311, na OCP bụ nke anọ. Nke a bụ nkeji nke abụọ .380.
Ọzọkwa ya bụ otu OCP a, OCP anọ.- Yabụ ọ nọ na-agbanwe agbanwe ruo ugbu a.- Ee.
Ma otu maka nke ikpeazụ. Na nkezi 460 watts na OCP 4 ọzọ.- Ọ dị mma. Kedu ihe bụ nsonaazụ nke ule m? Ọfọn, ịtọ 3.5.
Nke ahụ ziri ezi, ee. Ma dị nnọọ iche na ọnọdụ abụọ, nke m chụpụrụ n'okporo ụzọ ọtụtụ afọ gara aga. Rotor Na-ekwu, Onye na-enye ọzụzụ n'ime ụlọ m ga-ehota nchọta a na OCP ha oge ụfọdụ.
Maka m nke ahụ ga-apụta ibelata ọnọdụ ahụ na nke atọ mgbe ị nọ n'ụzọ. - Enweghị ezi ma ọ bụ ihe ọjọọ. Ọ bụrụ na ọ dị gị mma na nke a, ọbụlagodi na nke a kwuru ọnọdụ gị atọ, ka anyị kwuo ma ọ bụrụ na ị jiri ọnọdụ abụọ n'ihi na ọ dị gị mma, nke ahụ dị mma.
N'ihi na - N'ihi na anyị na-ekwu maka irighiri ogo mmụta - Ee, naanị ogo ole ma ole. Ọ bụ ezigbo ndu - ee, ọfụma - dịkwa mma, ọ dị mma. Ya mere, mgbe m na-ekpo ọkụ ma enwere m ebe a, Irene, achọrọ m ịjụ gị ajụjụ ole na ole banyere mita ike.
Yabụ ịmalite ihe mgbanaka Q ebe a na mbụ, mana mgbe ahụ ị ga - emepe ngwa ngwa ike mita, ọ bụghị ogologo oge mgbe nke ahụ gasịrị. Gịnị bụ ihe mere eji emekọ ha ọnụ? - Anyị chọrọ ịnwe ngwa ọrụ, dịka ngwa ọrụ sayensị, nke ga-enye anyị ohere ịnye onye na-agba ya ndụmọdụ nke ọnọdụ OCP kachasị mma maka nke ọ bụla. Anyị nwere ike ịnweta nke ahụ na mita ike.
Anyị nwere ike inye onye na-agba anyị ihe anyị ji mara ọnọdụ ha dị mma maka ha iji nweta uru kachasị nke mgbaaka oval. Ma ọ bụghị naanị banyere ọnọdụ ahụ, ọ bụkwa banyere ụdị ịkpụ ụkwụ na ịmara nke ọma ihe mgbatị ụkwụ gị bụ - dịkwa mma. Nke ahụ na - eduga m na ajụjụ m na - esote: mgbe ọnya elliptical malitere na-ewu ewu banyere 10 ma ọ bụ 12 afọ gara aga, a na - ekwu ọtụtụ okwu ugbu a banyere mita ike na - enweghị ike ijikwa ọnụ ọgụgụ ha mepụtara. n'ihi na inertia nke ike mita bụ agaghịkwa mgbe nile, na crank chọrọ a ike mita n'oge dum pedal ọrịa strok.
Olee ot you ui ga-esi zere nke ah u? - Ya mere, ihe anyị ji mita ike anyị mee bụ iji tụọ otu ụbọchị ọ bụghị n'otu ntugharị, kama ọ bụghị karịa n'otu oge. N'ụzọ dị otú a, anyị nwere ike ịkwụ ụgwọ maka mgbanwe ọsọ ndị a na ntụgharị ntụgharị. - Ọ dị mma, otu nnukwu ihe achọpụtarala n’ime afọ ole na ole gara aga bụ na mita ike dị ọtụtụ kwụsie ike karịa ka ha dịbu, ha na-agagharị na ọnọdụ okpomọkụ ọtụtụ oge, ma ị ga-akpachara anya banyere na-eme efu efu.
Ma ọ bụ tupu njem ọ bụla ma ọ bụ ihe ọ bụla. Ma achọpụtara m na onye nwe gị akwụkwọ ntuziaka na ọ na-eguzoro ma ọ bụrụhaala na ị gbanweghị pedal ma ọ bụ gbanwee cranks si igwe kwụ otu ebe gaa igwe kwụ otu ebe, ị ga - eme ya kwa awa 30. Kedu ihe kpatara na ọ na-esiwanye ike karịa ka ọ dịbu? - Igwe ike ọ bụla na-arụ ọrụ dị iche iche ma gbanwee na okpomọkụ, dabere na etu esi etinye mita ike na mita ike, ọ dabere na ma ọ bụ mita ike dabere na axis, ike igwe dabere na crank ma ọ bụ ike ududo mita.
N'ihi na anyị na-atụle na Ejima Ike. Iji maa atụ, na ị na-akwọ ụgbọ ala ugbu a n'ihi na anyị tụrụ na axis na ham cranked, n'ihi n'ụzọ anyị si etinye nje gauges. Ha na-akwụ ụgwọ na-akpaghị aka maka mgbanwe okpomọkụ ndị a.
Ọ bụ ya mere anyị ji akwado naanị nkwụsịtụ efu mgbe ị na-etinye cranks na igwe kwụ otu ebe gị ma emesịa mgbe mbụ 30 awa, ị maara na mgbe ị wụnye ya na nke mbụ, ihe niile ga-adaba. Ya mere, ị kwesịrị ị na calibrate ọzọ mgbe 30 awa. Mana dịka ọmụmaatụ na igwe ike ududo, INspider, nke anyị webatara na Eurobike, anyị ga-akwụ ụgwọ ụgwọ okpomọkụ.
Yabụ, anyị na-anwale gị eg. B. site na mwepu 20 degrees na plus 80 degrees.
Anyị nwere algorithm nke na-akwụ ụgwọ maka mgbanwe mgbanwe ndị ahụ - Ya mere, gịnị banyere Rotor Twin Power nke na-eme ka ọ dị iche na mita ike Spider gị ma ọ bụ ndị ọzọ? Ike mita n’ahịa? Kedu ihe dị iche na nke a? - Maka anyị, ihe pụrụ iche gbasara igwe ike anyị bụ na ha dakọtara na mgbanaka oval, ọ bụghị naanị na rotor oval yiri mgbaaka, mana ya na mgbaaka oval ndị ọzọ na ahịa. Dị ka n'ihe metụtara oke oke atụmatụ nke ike, ka ha na-ewere na nkezi ka ọsọ nke pedal adiana mgbe nile. Dị ka m kwuru na mbụ.
Yabụ ị nwere ike iji ya na mgbaaka oval wee nwee mmetụ ikike ziri ezi. Mgbe ahụ dịkwa oke mkpa ka anyị nweta nkwanye a maka ọnọdụ OCP ebe ị kwesịrị iji mgbaaka Q. Mgbe ahụ anyị nwere mita atọ dị ike dị iche iche.
Na ha niile dị iche iche, dabere na ọ bụ INPower, INspider ma ọ bụ Twin Power, ya mere INPower naanị na-atụle ụkwụ aka ekpe, wee d bawanye abụọ. Mgbe ahụ, INSpider na-anọdụ n'etiti n'ihi na ọ na-atụle ike jikọtara ụkwụ abụọ n'otu oge. Ma ọ dịghị ọdịiche dị n’etiti aka ekpe na aka nri.
Onu ogugu di nma, mana odighi ka ezi onodu ezi okwu, obu karie ntule. Eeh. Ma Ejima Ike bụ ihe ndị kasị zuru ezu ike mita anyị nwere n'ihi na anyị na-atụ ekpe na nri onwe ha.
Ọ dịka ịnwe mita abụọ na otu. Have nwere dynamometer na axle nke na-atụle akụkụ aka ekpe na dynamometer na crank aka nri nke na-eme akụkụ aka nri. - Enwere m ụbọchị nghọta na ịtụnanya nke ụbọchị ebe a na Rotor.
Amụtara m ọtụtụ ihe n'aka ha usoro nke ịmepụta ngwaahịa ha. Ọ bụrụ na isiokwu a masịrị gị ma ọ bụ mụta ihe na ya, biko nye ya nnukwu mkpịsị aka. Ma ugbu a ọ bụrụ na ịchọrọ ilele edemede ọzọ pịa ebe ahụ.
Ndi Rotor cranks dakọtara na Shimano?
Rotor3dcranksdabara otu ihe ahụShimano, ha na-dakọtara. Ee, 3D na - arụ ọrụ na iko braket BB86 mgbe niile. The 3D + mkpa pụrụ iche ala mgbodo iko nke na-ugbu a naanị mere site naRotorn'onwe ya.Dec. 8 2012
Nke a igwe kwụ otu ebe bịara na zuru SLX groupset na ọ bụ naanị ihe mere m ji nwee ya. Ma ọ bụghị ya, enweghị m mmasị na profaịlụ ọhụụ dị warara nke ihe nkedo ha, ma ọ bụ ududo asymmetrical maka silring.
Ọnụahịa ahụ adịchaghị mma ka m wee nye ha njem. Agbanyeghị, site na otu ọhụụ ọhụụ iri na abụọ, ewebatala akara ọhụụ nke m chere na ha bara uru. Cranks na-abatakarị na nnukwu igbe dị ka nke a.
Enweghị m ndị ahụ maka SLX, mana ị nwere ike ịhụ ebe a na nke a bụ ụzọ crankset 3 nke m gbanwere na ụzọ 1 dị mfe. Agbanyeghị, enwere ike ịchọta nkọwa nke otu crankset ahụ ebe a, na-esote aka mwepụ ụkwụ. Nke a bụ FC-M7100 crankset emere na Japan na ogologo m họọrọ bụ 170mm.
Achọrọ m igosi gị crankset ọhụrụ ahụ n'akụkụ crankset ọsọ ọsọ 9 n'ihi na agbanyeghị na emezigharị nke a, Shimano edebela ụfọdụ njirimara ya y ọ bụrụ na ị lee anya ebe a, axle 24mm, nke a bụ axle nchara nke ejiri na kranks ochie. gụnyere XTR ma dị ogologo dị iche iche dabere na ụdị nwechapụ ị nwere na igwe kwụ otu ebe. Ha nwere otu maka cranks na-akwadoghị, otu maka mmụba, yana otu maka nnukwu mmụba, yabụ nke ahụ bụ isi ọdịiche dị n'etiti cranks ndị a. Ma n'ihi nke a 24 mm spindle, otu Hollowtech 2 ala brackets na-eji na usoro isiokwu a.
Lee BB52 ochie, nke a bụ Deore, MT800, nweburu ya ma bụrụkwa otu ihe ahụ taa. Nwere ike ịhụ ụdị dị iche iche ebe a, site na eri ka nnyonye anya dabara BBs. A na-eji otu ihe ochie 16 notch BB a na-eji ụdị BB ala a mee ihe, agbanyeghị nke ọhụrụ a na-ejikwa ya n'okporo ụzọ, yabụ Ultegra, ga-achọ nkwụnye a ka iko ndị ahụ pere mpe.
Ya mere, nke a bụ ihe nkwụnye ọkụ nke ga - eme ka ngwa ọrụ ochie ahụ kwekọọ na BBs ọhụrụ, TL-FC25 ma ọ bụ ọrụ 24 bụ nọmba akụkụ Shimano. Agbanyeghị, a gụnyere otu na eri MT800. N'ihe ọhụụ SLX ọhụrụ ị ka nwere eriri 4-bolt, ha nwekwara ụdị ọsọ 2, mana na ụdị ọsọ ọsọ 1 nke ọsọ a bụ otu ibe na, nke kachasị mkpa, ọ bụ oke ugwu (DM) , na nke ahụ bụ ihe ọhụrụ maka Shimano, na mgbe m kwuru otu nkedo, nke ọma, cheta na ọ nwere ike ịbụ otu ịkekọrịta, ọ bụ n'ezie maka XTR, SLX, XT na Deore nwere otu ududo aluminom wuru, wee mee ka ị chọọ nchara ígwè nke ndị a na-enweghị ike iwepupu torx, ebe a ka a na-eji otu echiche ahụ nke ndị na-eme ihe na-eme, ị na-ahụ 35-50Nm, ma ebe a ọ ga-ekwu na nke a bụ kpọmkwem XT na SLX, na M ga-ekwuru na Deore.XTR nwere mgbanaka nkwado dị iche.
Lee ndị gbutere: ha ga - agwa gị otu ngwa ọrụ BB ka eji arụnye ma wepu oche ndị a. Ga-achọ ụfọdụ ụdị oghere, agbanyeghị, ebe ị na - enweghị ike ịgbakwunye nke a na ala iji hapụ ya. Yabụ ịchọrọ ngwa a na - akpọ TL-FC41.
Agwara m na XT na XTR cranks abịaworị na ngwá ọrụ ahụ. Agbanwela, profaịlụ ezé sara mbara nke Shimano agbanweela ọzọ, ọ bụ obere ọrụ karịa ka e wee mee ka ezé ndị a nwee anụ maka eriri ahụ pụrụ iche. HYPERGLIDE + ha chọrọ.
N'iji ya tụnyere, ọ bụrụ na ịlele nkedo ochie nke ọsọ ọsọ 11, lelee ezé: ha dị oke ma buru ibu. Ọ bụrụ na ị na-ele ndị na-eweta ngwaahịa nke ndị ọzọ maka Shimano 12-speed drivetrains, ha ga-atụ aro maka iji usoro Shimano. N'ihi na profaịlụ dị gịrịị nke ezé, ị gaghị enwe usoro ziri ezi nke nwere agbụ SRAM Eagle.
Chainring size, 12-ọsọ ọgbọ na Shimano logo na-na yinye, na ebe a na azụ bụ akụkụ nọmba SM-CRM75, na ndị a yinye na-mere na Japan. Otu oghere mepụtara aluminom sitere na Hollowtech 2, otu ihe a gbanwere, mana ọchịchịrị oge a. Mechaa nke na-adịghị ka ihe jọgburu onwe ya dị ka ị na-ahụ ebe a Ihe ochie 11-ọsọ cranks.
Ọzọkwa, nhazi a nke SLX na XT bụ ndị XTR stopgap FC-MT900 ji mee ihe mgbe ha gbalịsiri ike iji wuo XTR M9100 dị ugbu a. N'ụzọ na-akpali mmasị, ibu nke crankset a bụ gram 636, XTR bụ ihe dịka gram 100 pere mpe, mana nkenke mpempe akwụkwọ na XTR a dị ihe dị ka gram 50. So 50-60 gram dị iche n'etiti SLX na XT na XTR? Otu ihe nkedo abụọ ahụ ejiri kpuchie okpu ejibu 9-ọsọ bụ nke Deore, SLX na XT cranksets.
Na iji wụnye ha, wepụ ihe ahụ dị na mpụga ka obere nchara nchekwa plastik na-ebuli elu. Mgbe ahụ slide na crank ogwe aka n'elu spindle, a na-arụ ọrụ n'otu ụzọ na inupụ obere plastic taabụ n'ime ya. Mgbe ahụ were okpu torque gụnyere ma ị ga-etinye ya site na iji ngwa Shimano TL-FC16.
Nke a mara ezigbo mma, ya mere ọ dị mfe ịchọta. Ha ga-agbatị ihe a niile ka ha wee nwee ike ịda mba site na ịnwa iwepu egwuregwu niile ebe a. Mgbe ahụ ị ga - emecha tinyegharịa mkpọchi ahụ na isi 5mm hex isi.
Nkọwa banyere otu esi eme ka mkpọchi ndị a dị na ogwe aka ebe a, ma na nkenke, ị ga-eme ka mkpọchi abụọ ahụ sie ike. Ọ bụrụ na ịchọrọ usoro zuru ezu banyere otu esi esi wụnye bolts ndị a enwere m usoro zuru ezu nke how- Ọ bụrụ na ị na-achọ iwu igwe kwụ otu ebe site na ncha, gbaa mbọ chọpụta nke a! Echere m na Shimano were ihe dị mma n'oge gara aga wee melite ya na ntinye ego. Ejigidewokwa ndakọrịta nke oche na usoro ha niile site na Deore ruo XTR. 24 mm spindle na ihe ndabere a pụrụ ịdabere na ya, ezigbo ihe niile mere ị ga-eji tụlee Shimano cranksets ọzọ.
Kedu ihe ị chere? You ga-enwe mmasị ịzụrụ ihe ndị a maka nrụpụta ọdịnihu gị? Mee ka m mara echiche gị na ihe ndị dị n'okpuru. Y’oburu n’achoro na nke a bara uru, echefukwala inwe mmasị, ịdenye aha, lekwasị anya na mgbasa ozi mmekọrịta. Na lekwa gi na uzo ije, cheers!
Ndi Shimano centerlock rotors na-agbanwe agbanwe?
E debara aha. Ngwongwo obula siri ikerotorbukennyeghari.Eprel 4 2020
Ke ibuotikọ emi anyị na-aga site na usoro nke wepụ na wụnye a breeki diski. Anyị ga-ekpuchi ma oghere 6 na centerlock yana rotor nkwụnye. Ndewo, A bụ m Truman nwere Ugbo Ngwurugwu.
Co. Ndị a bụ ụfọdụ ihe kpatara ị ga - eji chọọ dochie diski breeki gị: Nke mbụ, diski breeki gị agwụla iji ya. Site na ịlele ọkpụrụkpụ nke braki elu ma jiri ya tụnyere akụkụ a na-ejighi ya nke diski breeki ahụ, ị ​​nwere ike ịchọpụta ma ọ bụrụ na eyi.
Ugboro a na-eyi nke abụọ rue ụzọ iri n'ụzọ atọ nke milimita ma ọ bụ karịa bụ ihe akaebe nke rotor eyi. Fọdụ ndị nrụpụta na-enye nkọwa nkọwa. Kpọtụrụ ndị na-emepụta maka akara maka ama ama ama.
I nwekwara ike na-eme atụmatụ mgbanwe mgbanwe site na-agba ọsọ a mandrel ma ọ bụ akwụkwọ clip n'elu braking elu. Ọ bụrụ na ọ na-enwe mmetụta siri ike ma nwee nzọụkwụ na njedebe, ọ na-egosi mkpa dị mkpa. Dochie a rotor.
Ọ bụrụ na ejiji rotor, lelee iji hụ ma ọ bụrụ na eyi breeki breeki na-eyi kwa ma dochie ya ma ọ dị mkpa. Mụtakwuo lee isiokwu a. # 2 bụ rotor gbagọrọ agbagọ.
Mgbaàmà nke rotor gbagọrọ agbagọ bụ: esemokwu ma ọ bụ mkpọtụ sitere na ntụgharị ọzọ. Ghagharị-ekwe omume n'ọnọdụ ụfọdụ, mana oge ụfọdụ nnọchi bụ nhọrọ kacha mma. Biko lee nke anyị maka ozi ndị ọzọ ihe mgbakwasa mgbanye.
Nke atọ - ịchọrọ ịgbanye na rotor dayameta dị iche, ma ọ bụ kwalite na rotor ka mma. Ke ofụri ofụri, ị chọrọ dochie a rotor na otu nke otu size. Ọ bụrụ na ị gbanwee oke rotor ị ga-enwe ike ịgbanwe mgbanwe gị na calipers ma ọ bụ ndị nrụpụta maka ịmatakwu ihe ọmụma Enwere isi nha anọ nke na-abata n'ọtụtụ ebe ụlọ ọrụ igwe - 140mm, 160mm, 180mm na 203mm.
Agbanyeghị, enwere ụfọdụ ndị ọpụpụ nwere ike ịmasị gị, yabụ kpachara anya ka ịlele ha. Mgbe ụfọdụ, a na-ede nha na rotor naanị maka ngbanwe nke ngbanwe. Ma ọ bụghị ya, ị ga-achọ ngwaọrụ kwesịrị ekwesị.
Ekpebiri rotor site na mpụga mpụga nke rotor. E nwekwara rotors na ahịa ndị na-adaba na ụfọdụ ngwakọta ngwakọta. Ndị rotors kwesịrị ime ka nke a doo anya na rotor n'onwe ya.
Ihe ọzọ ị ga - atụle mgbe ị na - azụta rotor ọhụrụ bụ ma ebe gị nwere oghere ma ọ bụ interface 6-oghere. A na-agbakwunye Rotors na etiti etiti na mgbanaka mkpọchi nwere ngwa ọrụ. Oghere 6-hole jiri 6 kposara na-ejide rotor jide Isiokwu a na-ekpuchi usoro abụọ ahụ, yana nkwụnye oghere 6-to-center.
Ka anyị na-amalite na 6-onu rotors. Maka rotors na etiti mkpọchi, gaa n'ihu na oge egosiri. Maka ịwụnye nkwụnye rotor, gaa n'oge a.
Ihe eji eme ihe na ihe eji eme ihe maka ndi uzo 6 nwere ike ibu: Nchikota aka na uzo di iche iche nke nwere oke kwesiri. Kacha roor kposara bụ T25 Torx dakọtara. Enwere ndị ọzọ; you ga-achọ mkpuchi mkpuchi, nhicha akwa, na mmanya isopropyl.
Wepu wiil na igwe kwụ otu ebe. Tọpụ ma wepụ ihe nkedo rotor na sprị kwesịrị ekwesị. Jide n'aka na itinye aka gị na ngwa ngwa dị ka ihe nkedo nwere ebe ezumike.
Mgbe emechara kposara niile, wepụ rotor. Ọzọ anyị wụnye rotor ọhụrụ. Ọ bụrụ na ndị rotor bịara na ọhụrụ bolts, lelee ha maka anaerobic threadlocker.
A kposara dị njikere maka nwụnye. Ọ bụrụ na ndị bolts enweghị eriri mkpuchi, ịnwere ike iji usoro dị ka Park Tool TLR-1 na oghere rotor arịọnụ oghere. Ọ na-ewe obere iji rụọ ọrụ.
Emela mmanu mmanu ma obu mmanu ndi ahu - ikpo oku nke braking nwere ike ime ka mmanu ahu puta. Ọ dị mkpa na braking elu nke rotor ọhụrụ ahụ na-anọgide na-enweghị nsị, gụnyere site n'aka gị. Ezubere Rotors ka ha daba n’usoro otu ụzọ.
Ọtụtụ aghụghọ nwere akụ nke kwesịrị dakọtara na ntụgharị nke wiil. Ma ọ bụghị ya, dozie rotor ka akụkụ ya na ide ya bụ fa Debe rotor na hub site na ijide rotor site n'akụkụ ya. Dozie oghere na rotor na oghere na-arị elu na ehiwe; eri na rotor kposara site na aka.
Gbaa mbọ hụ na ị gafereghị ha. Ugbu a na nkedo gị na spre gị ka ha wee dịrị nso na rotor elu, ma ọ bụghị imetụ ya aka. N'oge a, ị ga-atụgharịkwa rotor gị na ntanetị na-eduga ihu nke rotor megide kposara iji belata ike ịkwa osisi na mberede nke nwere ike ime mgbe ị na-agagharị.
Kedogide kposara ahụ ka ị na-ejide rotor n'ọnọdụ. Ugbu a, dobe nnochi igwe gi ma obu uzo gi ka gi na ebe kwesiri. Lelee na onye na-emepụta rotor maka nkọwa.
A ahụkarị torque maka ndị a kposara bụ gburugburu 4 na 6 Newton mita. Ọ bụrụ na ị na-eji mgbaaka aka, ị na-eji ike ahụ nke nwere mmetụta nke pụtara na ị na-eji spana nke bụ 4 'site na ịghasa, Tinye ihe dị ka kilogram 11 nke ike na usoro kpakpando, dị ka egosiri. Hichaa akụkụ abụọ nke rotor na-eji akwa dị ọcha na mmanya isopropyl.
The wheel dị ugbu a na-ndokwasa na igwe kwụ otu ebe. Ozugbo arụnyere, ọ ga-adị mma ịwụnye breeki, biko rụtụ aka na edemede a maka ama ndị ọzọ. Ihe eji arụ ọrụ na ihe eji eri ihe maka Centerlock rotors nwere ike ịgụnye: Ngwá ọrụ circlip kwesịrị ekwesị Maka mkpirisi ikuku dị n'ime, jiri otu n'ime ngwa ngwa FR-5 Ngwa Jiri maka Mpaghara Grooved Circle na BBT-9 ma ọ bụ BBT-69.2 will ga-achọkwa 3/8 ' Na mgbakwunye, a chọrọ 1 '' soket ma ọ bụ spana nwere ike idozi ka ọ na-ebugharị ihe ndị a na-eme na circlip ngwaọrụ Ọcha dị ọcha na mmanya isopropyl Ngwaọrụ dị na Snap ring.
Gbanye na ntughari aka ma wepu mgbanaka. Ugbu a, dọpụta rotor site na ehiwe. Mgbe ị na-etinye rotor ọhụrụ, ọ dị mkpa na braku elu nke rotor na-anọgide na-enweghị mmetọ.
Zere imetụ ya aka ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume. Ezubere Rotors ka ha nweta otu ụzọ g. Designsfọdụ atụmatụ nwere akụ nke kwesịrị ka o kwekọọ na ntụgharị nke wiil ahụ; ma ọ bụghị ya, dozie rotor ka akụkụ a kpọrọ aha na-eche ihu.
Achọghị mmanu mmanu maka ndị na-ahụ maka ihe dị n'etiti ụlọ ma nwee ike imetọ ikuku rotor anaghị atụ mmanu, ya mere etinyela ihe ọ bụla n'ọrụ. Mgbe ụfọdụ a rotor circlip nwere ike ịbụ dakọtara na ehiwe axle size. N'okwu a, jiri mgbanaka mgbachi nwere akara ndị dị na mpụga.
Mia rotor ka o di. Aka-ikesiike mgbachi mkpọchi. Kedochie mgbanaka mkpọchi dịka ntuziaka ndị nrụpụta si dị.
N'okwu anyị ọ bụ mita 40 Newton. Ọ bụrụ na ị na-eji aka spana, ị ga-achọ ijide spana 8 sentimita asatọ site na mkpọchi mgbanaka. Jiri akwa mmanya na mmanya isopropyl dị ọcha iji kpochapụ akụkụ abụọ nke ihu rotor.
Enwere ike ịdakwasị wiilị ahụ na igwe kwụ otu ebe ọzọ. Ozugbo arụnyere, ọ bụ ezi echiche ịmegharị breeki, lee edemede a maka ozi ndị ọzọ, ọ bụrụ na ịnwere rotor 6-hole ma chọọ ịkwanye nke a na oghere nwere mkpọchi etiti, ị nwere ike iji ihe nkwụnye ọkụ maka maka Ngwa ndị a dịtụ iche na imewe. Dakọtara nkwụnye ahụ na splines na ehiwe.
N'ihe atụ a, gbanye ihe nkedo site na rotor n'ime ihe nkwụnye ọkụ. Kwado rotor ma tinyezie kposara ndị ahụ n'ụdị kpakpando na nkwụnye ahụ, dịka ịwụnye n'elu 6-bolt hub. Wụghachite n'oge emere iji mụtakwuo.
Wụnye washers ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Kwupu na ikesiike na circlip. N'ihe atụ a, dị ka ịpị Rotor na njikọ 6 na nkwụnye ọkụ.
Kpughee mgbanaka mkpọchi, elekere rotor ma mee ka mgbachi mkpọchi ahụ sie ike. Mgbe ịtinyegharịrị wiil ahụ, na-atụgharị wiil ahụ iji hụ ma nhazi caliper ọ ka dị mma. Hụ anyị Disc Brake Caliper Alignment isiokwu maka ozi ndị ọzọ.
Daalụ maka ikiri. Lelee anyị ọzọ idozi isiokwu maka enyemaka gị brek, derailleurs, n'agbụ, cranks na ọtụtụ ndị ọzọ, na ịdenye aha anyị ọwa maka ọhụrụ isiokwu si Park Ngwá Ọrụ.
Ndi Shimano centerlock rotors bu otu?
E debara aha. Ngwongwo obula siri ikerotorkennyeghariEprel 4 2020
Nke a dịbu na XTR na Saint, RT99 bụ aha diski breeki a, mana na iwebata 12 ọsọ, Shimano bufere teknụzụ a na XT groupet, yabụ enwere m RT-MT800 rotor n'akụkụ ebe a. , ka anyị leruo ya anya nke ọma ma hụ otu o si dị otu ma ọ bụ dị iche na nke ochie RT99 dị mma, nke a bụ mpempe aluminom na-agbanye n'etiti nchara abụọ na nke a bụ etu Shimano si mee diski Teknụzụ Ice Technologies niile. Ihe puru iche banyere ndi rotor FREEZA bu akpukpo ajuju na-eme ka obi sie ha ike.
Disc, nọmba ngwaahịa nke RT-MT800 bụ maka XT, emere na Japan, dịka nke ochie. Adiana nke diski, nke o doro anya gosiri na Àkụ áká na n'ikpeazụ size nke diski gị na nke kacha nta mma ọkpụrụkpụ nke na diski. Akọwapụtara ya dị ka 1.5 mm.
Igwe nkpuchi 1.75 mm buru ibu si na igbe. RT-MT900, nke XTR nke ya, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu, ya na agba agba oyi na-acha oji.
Ọ bụghị ọtụtụ ihe ị ga-ahụ n'azụ rotor ma e wezụga ọnye ndị dị na ududo aluminom nwere ike ịchekwa ibu. XTR ochie ma ọ bụ Saint nwere ụdị dị iche iche nke nku oyi a. Ọzọkwa, ududo ududo dị iche.
Enwere m diski OEM m, yabụ enweghị igbe, mana Shimano na-eji otu ihe ahụ eme ihe n'oge gara aga jiri koodu ngwaahịa ziri ezi. Mkpọchi Center bụ otu ihe mgbakwunye dị ka ududo aluminom gara aga, ọzọ yiri, na diski a nwere ike iji ya na resin na metal. Ndị a bụ nha dịnụ ma o doro anya na nke a ga-abụ XT washer, XTR ma ọ bụ Saint bụ ezigbo ochie RT99.
Mpempe akwụkwọ 180 mm dị na gram 133 na 160 mm dị na 106 g. N'iji ya tụnyere, 160mm RT99 tụlere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu rotors nke ọgbọ gara aga na 109g. Iji wụnye diski, ị ga-achọ otu n'ime mgbanaka mkpọchi ndị a n'ihu na otu na azụ.
Yabụ tinye 10 ma ọ bụ 8 gram na ibu nke diski ahụ. Shimano wetara diski mkpọchi ha na ụdị mgbanaka mkpọchi a, nke dị mma maka ụdị axle QR na igwe kwụ otu ebe. Na-arụkwa ọrụ nke ọma maka axle azụ, yabụ 12 Ọ bụrụ na ịgbanwee gaa n'ihu ihu nwere ike ịbụ 15 ma ọ bụ 20 mm, ị ga-ahụ ihe kpatara enweghị ike iji mgbanaka mkpọchi a, ọ gaghị adaba, yabụ ị ga-eji nke buru ibu nke abụọ maka nke a na nzukọ nke onye na-asacha akwa ahụ adịghị mkpa: ị na-amịpụ ihe mkpofu gị n'elu ogwe osisi ahụ wee gbanye mgbanaka mkpọchi ahụ na 40 Nm site na iji 16 ngwa ngwa Shimano BB.
Na ịkọwapụta nke ọma na nrụgide ahụ na-agba ume, ị nwere ike iji ụdị hex nke ngwa BB, m ga-agbakwunye njikọ na nkọwapụta maka ngwaọrụ ndị a, enwere ike iji otu circlip buru ibu karịa azụ 12mm ma ọ bụ QR, ị nwere ike lee ihe ngosi a kwuru, 40 Nm, wee mee nke a jiri ngwa cassette. N'ikpeazụ, wepu akara ngosi na-agwa gị ka ị ghara imetụ diski ahụ n'oge nrụnye, na n'ihi na amaara m na ị ga-emetụ ya aka, jiri ụfọdụ mmanya isopropyl wee hichapụ diski ahụ. Tupu ị rute ugwu, gbaa mbọ hụ na ị pịa brek! N'ime usoro a, a na-etinye ụfọdụ n'ime ihe mkpuchi ahụ na breeki breeki nke rotor na nke a na-enye gị arụmọrụ kachasị na ogologo oge nke diski gị na linings gị.
Kedu ihe kpatara m ji egosi gị ngwa ọrụ rotor? N'ihi na m nwere diski ndị a maka afọ 2 nke m nwere, ọ dịghị mgbe ọ bụla ị ga-emetụ aka, ha dị mma ma gbaa gburugburu ma na-eme nnukwu ihe igwe kwụ otu ebe a. Na mgbe ị jiri ndị nwere resin pad maka afọ abụọ, ị ga-ahụ na esila m n'ihe dịka 1.75mm ruo 1.69mm.
Amaara m na ị ga-ajụ m ma enwere nsogbu ọ bụla n'iji ndị rotors eme ihe? “Nanị ihu ala m nwere ike ịhụ bụ na ịchọrọ interface mkpọchi etiti iji tinye nke a na nlekọta gị. Ya mere ịkwesịrị ịzụta wiil nke ga-akwado ụdị rotors a. Na-eme atụmatụ iji otu n'ime Shimano FREEZA rotors? adị n'ụdị XT N'oge ahụ nke wetula ọnụahịa ntakịrị.
Ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, mee ka m mara n’ihe ndị a n’okpuru. Dị ka oge niile, echefula inwe mmasị, denye aha na mgbasa ozi mmekọrịta, lekwasị anya na ndị na-elekọta gị n'okporo ụzọ. Chei ụmụ okorobịa, nwee nụ!
Ihe niile diski rotors dakọtara?
N'ozuzu,diski breeki rotorsnke otu dayameta na-eche banyere dị ka obe-dakọtara, ma e nwere ụfọdụ okwu ikpe mgbe nke a nwere ike ọ gaghị abụ eziokwu:Rotorọkpụrụkpụ nwere ike ọ gaghị abụ otu ihe n'ofe emepụta nabreeki breekicalipers nwere ike iji na thicker / mkparotorn'uche.16bọchị 16 2019
Ndị na - agba etiti na - abịa na mkpọchi?
Nagụnyereotu nwere ike ịbụ ụkpụrụ nke nwere ike daba azụ ma ọ bụghị n'ihu. You'll ga-azụta nke ahụ maka 15 / 20mm hubs.Ọkt 13 2017
Kedu ka oke Shimano brek rotors?
Shimano rotorsmere 1.8mmọkpụrụkpụma kwesiri dochie anya mgbeọkpụrụkpụbelatara 1.5mm. Kemgbe 2010, 1.5mm opekempe kwadoroọkpụrụkpụ rotorebipụtawoShimano rotors.
SRAM ọ ga-agbaji Shimano rotors?
Gịnwere ikejiriShimano rotorsnaSRAM brekmgbe: Ugbu abreekiusoro dakọtara na dayameta nke ọhụrụrotor. Ọ bụrụ na ị na-agbanye na iburotor, gịgachọrọ nkwụnye. Ọ bụrụ na ị na-agba ọsọShimano203mmrotors, may nwekwara ike ịchọ onye mmezi maka nwechapụ ọzọ.Mar 28 2021
Ndi ndi na-agba okirikiri otu?
E debara aha. Ngwongwo obula siri ikerotorkennyeghari04.04.2020
Nwere ike ịgbanwe 6 bolt na etiti mkpọchi?
mba, odi nwute na odighi uzo eji ari elu aetitirotor on a6 mkpọchiehiwe06.12.2008
Kedu ka rotor 3D road crankset si arụ ọrụ?
Dabara adaba dị mfe, site na Dual Thread Technology (DTT) pụrụ iche ﬁ xing bolt na-ejikọ ihe na-abụghị draịva na axle site na iji eriri abụọ dị iche iche n'otu eriri.
Kedu ọkụ ọkụ Rotor dị n'ụwa?
Aldhu bụ Lightor Rotor crank nke Akụkọ. Ọ na-agwakọta isi ike na fechaa. Can nwere ike ịtụ anya na 80g nke ibu ibu ịchekwa VS a Dura Ace 9100. can nwere ike ịhọrọ Rim ma ọ bụ okporo ụzọ axle, ụdị spidering na ogwe aka. Obi dị anyị ụtọ ịbuga n'ụwa niile ngwaahịa a ka ọ dabara na obere ngwugwu.
Ihe rotor 3D ọ bụ ezigbo igwe kwụ otu ebe?
Maka ndị na-agba ịnyịnya nke ụzọ ndị ha na-emebu na-agagharịkarị n'etiti mgbanaka, nzaghachi oge nwere ike ịmalite ịmịchaa obere oge, mana n'akụkụ ndị ọzọ 3Ds rụrụ ọfụma.